Somaliland oo sheegtay in musaafurin doonto dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee ku sugan gobolka Saaxil. | Dayniile.com
Home Warkii Somaliland oo sheegtay in musaafurin doonto dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee...
Somaliland oo sheegtay in musaafurin doonto dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee ku sugan gobolka Saaxil.
Usbuucyo ka hor ayay ahayd markii maamulka Somaliland uu xoog uga baxshay dadkii ka soo jeeday Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee ku suganaa magaalada laas caanood, waxayna mar kale sheegeen in ay Masaafurin doonaan dad ka soo jeeda Deegaanadaas ee ku sugan GobolkaSaaxil.
Sida uu sheegay Badhasaabka gobolka Saaxil, Dr Axmed Maxamed Xaashi ayaa shaaciyey inay bilaabeen tirakoobka dadka Koonfurta, islamarkaana ay deegaanada gobolka ka saari doonaana, sida uu sheegay.
Previous articleGuriceel:- Ayaanle kadib, Habar-eji Oo Suufiyada Ahlusunna Ka Dalbatay Inay Dhufaysyada Qaadaan
Next articleCiidamadii la socday shekh shaakir ee ka soo jeeday C/waaq oo ka baxay magaalada Guriceel kadib markii la dilay askari
Madaxweyne Ku Xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar iyo Masuuliyeen kale ayaa manta Booqday Xarunta Saldhiga Booliska Magaalada Baladweyne oo shalay oo ka dhacay qaraxa...